Daabacaadda Bulshada DBeaver 21.2.1: Nooc cusub ayaa la heli karaa 2021 | Laga soo bilaabo Linux
Linux Post Ku Rakib | 05/10/2021 06:00 | Aplicaciones, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Markay timaaddo in la helo maamul ama maarayn hufan oo wax ku ool ah Macluumaadka (BBDD), inta badan waxaan isticmaalnaa a aalad maareynta keydka gaarka ah kuwaan, maadaama, guud ahaan, hal nooc oo kaliya Macluumaadka (DB) horumar gaar ah.
Laakiin marka noocyada kala duwan ee Macluumaadka hal ama dhowr horumar ama nidaam, fikradda ayaa ah in la yeesho a Maamulaha keydka xogta guud taasi waxay noo oggolaanaysaa inaan la shaqayno noocyo kala duwan Macluumaadka isla mar ahaantaana, sida, "Daabacaadda Bulshada DBeaver". Sida, "Daabacaadda Bulshada DBeaver" Waa a aaladda xogta guud, il bilaash ah oo furan, loogu talagalay soo -saareyaasha iyo maamulayaasha keydka xogta.
Kuwa danaynaya inay sahamiyaan qaar ka mid ah kuwayaga qoraallo hore oo la xiriira arjiga «Daabacaadda Bulshada DBeaver» iyo baaxadda Macluumaadka (BBDD), waxaad riixi kartaa xiriiriyeyaasha soo socda, ka dib markaad dhammaysato akhrinta daabacaadan:
DBeaver waa softiweer u dhaqma sidii aalad xog -ururin caalami ah oo loogu talagalay soo -saareyaasha xogta iyo maamulayaasha. Waxay leedahay istcimaal isticmaale oo si wanaagsan loo qaabeeyey, madal ku saleysan qaab il furan oo u oggolaanaya qoritaanka fiditaanno badan, iyo sidoo kale la jaanqaadka xog-ururin kasta. Waxa kale oo ka mid ah taageerada macaamiisha MySQL iyo macaamiisha Oracle, maamulka darawalka, tifaftiraha SQL, iyo qaabaynta. Intaa waxaa sii dheer, waa codsi dhinacyo badan leh maadaama ay taageero u leedahay aaladaha MacOS, Windows iyo Linux. DBeaver: waa qalab aad u fiican maaraynta DBs kala duwan
35 Matoorada Macluumaadka Xogta Furan
1 Daabacaadda Bulshada DBeaver 21.2.1 - Nooca la sii daayay 19/09/21
1.1 Tilmaamaha Hadda
1.2 Maxaa ku cusub Daabacaadda Bulshada DBeaver 21.2.1
1.4 Macluumaad dheeraad ah
Daabacaadda Bulshada DBeaver 21.2.1 - Nooca la sii daayay 19/09/21
Tan iyo qoraalkii ugu dambeeyay ee ku saabsan "Daabacaadda Bulshada DBeaver" Ku dhawaad ​​2 sano ka hor, dalabka xoogaa wuu is beddelay, laakiin kuwani wali waa kan ugu weyn 10 sifooyinka hadda:
Waa qaab-dhismeed badan.
Waa il furan oo furan (ASL).
Waxay bixisaa taageero ilaha xogta daruurta.
Waxay bixisaa taageero heerka amniga meheradda.
Waxaa ku jira taageero xog -ururin kasta oo leh darawal JDBC.
Waxay maamuli kartaa ilo kasta oo xog dibadeed ah oo laga yaabo ama laga yaabo inaysan lahayn darawal JDBC.
Waxaa ka mid ah kartida la shaqeynta fidinta kala duwan ee is dhexgalka Excel, Git, iyo kuwa kale.
Waxay ku saleysan tahay qaab il furan waxayna u oggolaaneysaa qoritaanka fiditaanno kala duwan (plugins).
Waxay leedahay set plugins oo loogu talagalay keydka macluumaadka kala duwan iyo adeegyada maareynta keydka ee kala duwan.
Isticmaalka wali waa hadafkiisa ugu weyn, sidaa darteed GUI -gu weli si taxaddar leh ayaa loo qaabeeyey loona hirgeliyey.
Maxaa ku cusub Daabacaadda Bulshada DBeaver 21.2.1
Waxaa ka mid ah kuwa badan wararka waa kuwan soo socda 10:
Adeegsiga Tunnel -ka SSH isku -xidhaha server -ka booda (lambarka dekedda) ayaa la hagaajiyay.
Waxaa lagu daray qaraar gaagaabyada daaqadaha.
Taageerada dalbashada tiirka ayaa lagu daray adeegsiga Jaantusyada Xiriirka-Xiriirka (ERD).
Xiriirka isticmaalaha wada hadalka xaqiijinta ayaa dib loo qaabeeyey.
Raadinta metadata, raadinta ku jira isku-duwaha faallada sheyga ayaa la hagaajiyay oo bogga raadinta ee raadinta xog-ururinta ayaa la saxay.
Cusboonaysiinta maareeyaha kalfadhiga keydka xogta waa la hagaajiyay.
DB2, taageerada raadinta tiirar, habraacyo, iyo shaqooyin ayaa lagu daray.
Wixii loogu talagalay Firebird, taageerada goobaha xisaabinta ayaa lagu daray.
Miiska DDL (Furayaasha Gaarka ah) ee go'an ee Greenplum.
Taageerada loogu yeero H2 magac -u -yaalka nidaamka ayaa lagu daray.
Si aad u wada aragto Maxaa Cusub ee 21.2.1 la arki karo Halkan.
Qaarkood horumar, lacag la'aan ah iyo / ama horumar il oo furan taas oo loo adeegsan karo beddellada "Daabacaadda Bulshada DBeaver" waa kuwan soo socda 10:
para macluumaad dheeraad ah ku saabsan "Daabacaadda Bulshada DBeaver" waxaad si toos ah u booqan kartaa qaybtiisa Noticias iyo goobteeda rasmiga ah ee GitHub. Ka sokow bogga rasmiga ah ee ganacsiga.
Inta, adiga download e rakibaadda, xusuusnow inaad sii wadi karto adeegsiga tilmaamaheena post la xiriira hore:
Soo koobid, "Daabacaadda Bulshada DBeaver" 21.2.1 waa nooc cusub oo muhiim ah oo ah qalabkan keydka caalamiga ah ee cajiibka ah oo loogu talagalay soo -saareyaasha keydinta xogta iyo maamulayaasha. In ilaa maantadan ay qaab ahaan ku sii jirto bilaash ah oo furan si ay u anfacdo Bulshadaada oo dhan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Daabacaadda Bulshada DBeaver 21.2.1: Nooca cusub ayaa la heli karaa 2021